हेर्नुहोला, आगामी चुनावमा एमाले मधेशमा कसरी बडारिन्छ ! – YesKathmandu.com
लक्ष्मण लाल कर्ण,सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
हामीले ‘क्लियर’ साथ भनेका छौं–संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन नगरी कुनै काम अगाडि बढ्न सक्दैन । हामी कन्फ्युजमा छैंनौ । तीन जना नेताले छलफल गर्दैमा निर्वाचन हुँदैन । एउटा संसदको, अर्को स्थानीय तहको र अर्को पूरानै संरचनामा निर्वाचन गरौं भन्ने यी तीन नेताहरुको कुरा मिलेको छैन । अनि अब कसरी निर्वाचन हुन्छ ?
यो संविधान अपुरो र अधुरो छ । मधेसीलगायतले यो संविधानबाट अधिकार नै पाएका छैनन । अब यस्तो अपुरो संविधान परिमार्जन नगरी कसरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ ? बुझ्न चाहनुहुन्छ–एमाले त मधेसविरोधी पार्टी हो । उसको सारा गतिविधि मधेस,जनजाति,महिला थारु विरोधमा छ । यस्तो पार्टीको कुरा गरेर काम छैंन । मधेस आन्दोलनका क्रममा ६० जनाले ज्यान गुमाए,कैयनले गोली खाएर शहादत भए के उनीहरुकोे चाहिँ रगत होइन ? त्यसो हो भने सरकारले भन्नुपर्यो सडकमा आउने र गोली खाने नेपाली होइनन ? यदि उनीहरु नेपालको नागरिक हुन भने उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो ।
अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ । अब निर्वाचन भयो भने परिणाम निकै फरक आउनेछ । एमालेलगायतका मधेसविरोधी पार्टीहरु मधेसबाट बढारिने छन् । यसमा ढुक्क भए हुन्छ,मैले केहिँ भनिरहनुपर्दैन । निर्वाचन हुने दिशातिर देश गयो भने त्यसको प्रतिरोधमा हामी उत्रन्छौं । त्यसका लागि के कस्ता कसरत थालनी गर्नुपर्ने हो हामी अवश्य गर्छौं । जुनवेला हामी आन्दोलनमा गएका थियौं,त्यतिबेला कसैले पनि यतिका जनता सडकमा आएर साथ दिन्छन् भन्ने सोचेका थिएनन् । तर, जनता त सडकमा ओइरिए । त्यसैले फेरि पनि हामीलाई धोका भयो भने आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।
हामीले संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पास गर्दा हामी सहयोग गर्छौ भनेका थियौं । हामीले कुनै नयाँ कुरा राखेका छैंनौ । हामी राष्ट्रको समस्या समाधानका निम्ति लचक भएर प्रस्तुत भएका छौं । राष्ट्रघातको आरोप त मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने षड्यन्त्र मात्रै हो ।
madesh aandolanma 50 jana ta sushil koirala pm hudai mareka thiya feri kun mukh le yasto kaite kura garxau ho kangres mao sanga milera…laj lagdaina timlai????
भडुवा नेता को भाड्ने काम बाहेक केनै हुन्छ र ?
Haraamilai k ko laaj; sadhai kich kich Lainchaur ko ishara ma..!
शिक्षामन्त्रीको लोपले १० महिनामा पनि आएन ११ कक्षाको नतिजा
बाबुरामको विद्वताले जनतालाई सास्ती दियो
काठमाडौं विमान स्थलमा थाई एयरको जहाजमा चरा छिर्‍यो